Wasiirka Gaashaandhiga JSL Oo Ka Qayb Galay Xidhitaanka Barnaamijka Shaqo Qaran – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta si rasmi ah u soo xidhay wejiga koowaad ee barnaamujka carbiska dhallinyarada ee shaqo qaran oo muddo bilo ah ka socday deegaanka Darar-weyne ee dhinaca waqooyi Bari kaga beegan caasimadda Hargeysa.
Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, Mudane Cabdiqani Maxamuud Caateeye, Taliyaha ciidanka militeriga, Sarreeye gaas Nuux Ismaaciil Taani iyo Marwo Edna Aadan Ismaaciil oo hadallo ka jeediyey madasha lagu soo xidhay wejiga koowaad ee barnaamujka shaqo qaran, ayaa si isku mid ah u bogaadiyey mashruucan, waxana ay tilmaameen inuu barnaamujkani tusaale u yahay sida ay Somaliland iskeed u qabsan karto wax kasta oo ay u aragto inay horumarin karaan dadkeeda iyo dawladnimadeeda. Waxaana hadaladii wasiirka gaashaandhigu uu madasha ka jeediyey ka mid ahaa ”Marka koowaad waxaynu nahay Islaam waxaad halkaa ka garanaysaa maalintuu bilaabay Madaxweynaheenu JSL niyad wanaaga, waxa uu xidhitaankii ku soo hagaajiyey 21 Ramadaan oo ah maalin barakaysan oo Salaadii taajudka la soo tukaday, waxa midho dhalkii kuu muuqda in ardaydii 400 oo ka mid ah ay qaadatay shirkada Singapore Oil. Markaa waxa halkaa ka muuqata in niyad wanaag markii hore lagu furay kuna soo hagaajiyey xidhitaankii maalin barakaysan”. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi ”Maanta waxaynu halkan u wada joognaa in madaxweynaha Qaranku mudane Muuse Biixi Cabdi uu inoo soo xidho dufcadii koowaad ee ka qalin jabisa Shaqo Qarran oo tiradoodo dhantahay 1350 kana kala yimid dhamaan gobolada dalka min Laascaanood ilaa Saylac”.
Geesta kale waxa uu wasiirku xusay in uu hindisaha barnaamijka shaqo qaran uu lahaa madaxweynaha JSL Mudane Muuse Biixi Cabdi, taasi oo u jeedadu tahay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo garaadka dhalinyarada reer Somaliland.